Ciidamo ka soo baxay furimaha Tukaraq oo la wareegey agagaarka kantaroolka & geedka Yoocada.
June 9, 2021 Xuseen 0
Puntlandtimes (Garoowe)-Ciidamo hubaysan oo katirsan kuwa Daraawiishta Puntland ayaa muddo laba asbuuc ku dhow gacanta ku haya inta u dhexaysa magaalada Garoowe iyo Kantaroolka Bixin ee Waqooyiga magaalada Caasimadda ah.
Ciidamadaan oo ku gaashaaman ku dhowaad 10 gaadiidka dagaalka ah ayaa waxa ay gacanta ku hayaan dhisme aad u ballaarin oo dhowaan dagaal dhimasho sababay ku dhexmaray malayshiyaad hubaysan oo ka qawlaysta boobka dhulka.
Madaxweynaha Puntland ayaa amray ciidankaan oo ku sugnaa gobolka Sool inay gacanta ku hayaan dhulkaasi inta laga gaarayo xal kama dambays ah waxaana la burburiyey guud ahaan dhismihii sababay dagaalka oo marar badan soo laalaabtay.
Qaar kamid ah malayshiyaadkii dagaalamay ayaa u baxsaday miyiga magaalada Garoowe halka kuwa kalena loo sheegay in ciddii timaadda xabsiga loo taxaabi doono ayna dowladdu la wareegtey dhulkaasi sababay khasaaraha isugu jira dhimashada iyo dhaawaca.